घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू क्यानाडाई फुटबल खेलाडीहरू अल्फोन्सो डेभिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “शेफ डी“। हामी तपाईंलाई अल्फोन्सो डेभिस चाइल्डहुड स्टोरी, बायोग्राफी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छौं जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
डेभिस अल्फोन्सोको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र गोल।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ उहाँ एमएलएसबाट बाहिर निस्किने सबैभन्दा प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडीहरू मध्ये एक हो। यद्यपि, केवल थोरै प्रशंसकहरूले हाम्रो अल्फोन्सो डेभिसको जीवनी संस्करणको विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
अल्फोन्सो डेभिस बाल्यकाल कहानी:
अल्फोन्सो बोयल डेभिस नोभेम्बर २००० को दोस्रो दिनमा घानाको लोकप्रिय बुडुबुराम शरणार्थी शिविरमा उनकी आमा, भिक्टोरिया डेभिस र बुबा डेब्या डेभिसको जन्म भएको थियो। उनी भिक्टोरिया र डेबाहमा जन्मेका तीन छोरा मध्ये पहिलो छोरा र छोरा हुन्।
हो, तपाईंले हामीलाई सुन्नुभयो!, अल्फोन्सो घानियन शरणार्थी शिविरमा जन्म भएको थियो, जसको अर्थ हो, उहाँ घानियन नागरिक भन्दा टाढा हुनुहुन्छ। सत्य भनिएको छ!, उहाँ मूल रूप मा एक लाइब्रेरियन नागरिक हुन चाहनुभएको हो। र तपाईंलाई थाँहा थियो?… अल्फोन्सो डेभिसका अभिभावक १ 1999 XNUMX। मा दोस्रो लाइबेरियाको गृहयुद्ध पछि लाइबेरिया (पश्चिमी अफ्रिकी देश) बाट भागे।
उनका आमाबुबा मात्र होइन, अल्फोन्सका डेभिसका अधिकांश परिवारका सदस्यहरूले पश्चिम अफ्रिकाभरि सयौं माइल यात्रा गरे जबसम्म उनीहरू घानाको अक्राको नजिक बुडुबुराम शरणार्थी शिविरमा अभयारण्य भेट्टाएनन्। यो शिविरमा नै थियो कि जवान अल्फोन्सोले आफ्नो जीवनको पहिलो चार वर्ष आफ्नो परिवारको मूलको लागि पराई भूमिमा हुर्काए।
अल्फोन्सो डेभिस आमा बुबा मात्र युद्धबाट भागिरहेका थिएनन्। उनीहरू पश्‍चिम अफ्रिका भर मैला यात्रा गर्दै थिए आफ्नो अजन्मे बच्चाको भविष्यको फुटबल नायकको लागि उत्तम जीवनको खोजीमा। छवि क्रेडिट: गुगल नक्शा र इन्स्टाग्राम।
अल्फोन्सो डेभिस पारिवारिक पृष्ठभूमि:
अल्फोन्सो डेभिसको परिवारको उत्पत्ति बोल्नुहोस्, उहाँका बाबुआमा कुनै शंका बिना गरिब परिवारको पृष्ठभूमिबाट लाइबेरियनहरू हुन्। दोस्रो लाइबेरियाको युद्ध सुरु हुँदा डेबिया र भिक्टोरिया जवान दम्पतीहरू थिए, यो विकासले उनीहरूलाई युद्धमा भाग लिने वा भाग्ने विकल्पहरूको साथ छोडिदियो। भाग्यवस, तिनीहरूले पछिल्लो छनौट गर्दछन् र अब, दुबै (तल चित्रमा) आफ्नो पारिवारिक रूखको सम्भव विनाश भन्दा उनीहरूको जीवनको छनौटको कदर गर्न बाँच्दछन्।
उनका बुबाआमा आज मुस्कुराए किनभने युद्धबाट भाग्ने निर्णय लिनुको पहिलो निर्णय लिनुभयो। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
"यो युद्धको समयमा लाइबेरियामा बस्न निकै गाह्रो थियो किनकि बाँच्नको मतलब तपाईसँग लडाईँ गर्न बन्दुक बोक्नु पर्छ। हामीलाई त्यसमा कुनै चासो थिएन, "
अल्फोन्सो डेभिसका बुबालाई याद छ। उनको आमाको पक्षमा, उनी आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लागि खाना लिन मृत शरीरहरू पार गर्ने सम्झना गर्दछिन। वास्तवमा, उनीहरू त्यस्तो किसिमको वातावरण थिएनन् जुन उनीहरू आफ्ना बच्चाहरूको हुर्कन चाहन्छन्।
अल्फोन्सो डेभिस शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
अल्फोन्सो डेभिसको परिवारले क्यानाडामा पुनर्वास कार्यक्रमको एक हिस्साको रूपमा प्रवासको प्रस्तावलाई अँगाले जब उनी five बर्षको उमेरमा थिए। तिनीहरू २०० 2005 मा देशमा आइपुगे र सुरुमा ओन्टारियोको विन्डसरमा बसोबास गरे।
एक वर्ष पछि, परिवार अल्बर्टाको एडमन्टन शहरमा सरे। यो शहर मा नै जीवन साँच्चै अल्फोन्सो को लागी शुरू भयो, जो आफ्नी कान्छी बहिनी रुथ र सानो भाईको साथमा खुशी बच्चाको रूपमा हुर्कियो।
ऊ खुशीसाथ क्यानाडामा हुर्किएको थिएन तर क्यानाडाको नागरिक बन्ने प्रक्रियामा थियो। छवि क्रेडिट: यूट्यूब।
वास्तबमा, एडमन्टनको नर्थमाउन्ट इलेमेन्टरीको घाँस क्षेत्रहरू जहाँ अल्फोन्सो डेभिसले पहिलो पटक बाल्यावस्थाको खेलको रूपमा फुटबल खेल्ने तरीका सिकेका थिए। यो जहाँबाट उनको फुटबल भाग्य शुरू भयो।
आफ्नो शिक्षाको सन्दर्भमा, अल्फोन्सोले यही शहर एडमन्टनको मदर थेरेसा क्याथोलिक स्कूलमा पढ्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर, उनको प्राकृतिक ड्रिबलिंग स्किलसेट र मदर थेरेसा क्याथोलिक स्कूलमा फुटबल खेल्ने क्रममा आफ्ना साथीहरूलाई कसरी रोक्नुभयो भनेर याद गर्न लगभग असम्भव थियो।
अल्फोन्सो डेभिस फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
मेलिसा गुज्जोलाई धन्यवाद छ - अल्फोन्सोको ग्रेड teacher को शिक्षक र मदर थेरेसा क्याथोलिक स्कूलका स्पोर्ट कोच - फुटबल खेलाडी भित्री-शहरका बच्चाहरूको लागि स्कूल पछि पहलमा भर्ना गरिएको थियो "नि: शुल्क फुटी कार्यक्रम".
यसको नाम सही छ, नि: शुल्क फुटी यो स्वतन्त्र थियो किनकि यसले अल्फोन्सो डेभिसका आमाबुवालाई मद्दत पुर्‍यायो जसले अन्य फुटबल प्रतिष्ठानहरूको लागि फुटबल शुल्क बढाउन सक्षम थिएनन्। पहलले अन्य भित्री शहरका बच्चाहरूलाई पनि मद्दत पुर्‍यायो जसले फुटबलमा उनीहरूको रुचि अन्वेषण गर्न दर्ता शुल्क वा यातायात खर्च गर्न सक्दैनन्। अल्फोन्सो पछि, स्थानीय क्लब निकोलस एकेडेमीमा सामेल भए। यो पछिको महत्वपूर्ण-बर्षको क्यारियर एडमन्टन स्ट्राइकरहरूको साथ पछि भयो।
अल्फोन्सो डेभिसको जीवनी- ख्याति कथा को मार्ग:
२०१ 2015 मा, अल्फोन्सो डेभिसका अभिभावकहरू क्यारियर टर्निंगमा सहमत भए, एउटा प्रस्ताव जुन उनीहरूको पहिलो छोरालाई उनीहरूबाट भ्याकूवरमा खेल्न लैजान्छ। हाम्रो मापन द्वारा, यो लगभग १,१1,159.5 .XNUMX। Km किलोमिटर टाढा थियो (रोडद्वारा) एडमन्टनको परिवार घरबाट। डेबिया र भिक्टोरियाले अल्फोन्सोलाई आशिष् दिए र उनलाई भ्यान्कूभर ह्वाइटकैप्स युवा सेटअपमा सामेल हुनको लागि पठाए।
तत्कालीन १ 14 बर्षे उमेर क्लबमा प्रभावित भए, उनी २०१ 15 मा १3बर्ष, months महिनामा युएसएल अनुबंधमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो कान्छी खेलाडी भए। अरु के?… अल्फोन्सोले २०१ 2016 मा भ्याकूवर ह्वाइटकैप्स एफसीको पहिलो टीमलाई पदोन्नति कमायो, त्यही वर्ष उनको एमएलएस डेब्यू भयो र त्यसपछिका प्रभावशाली प्रदर्शनहरू थिए।
१ 15 वर्षको उमेरमा, अल्फोन्सो जवान थियो र सफल हुन केवल सही चरित्रको साथ महत्वाकांक्षी। छवि क्रेडिट: भ्याकूवरWhitecaps।
अल्फोन्सो डेभिसको जीवनी- ख्याति कथा माथि उठ्नुहोस्:
भ्याकूवर ह्वाइटकैप्स एफसीको साथ अल्फोन्सोको क्यारियरको चरम सीमामा, उनी क्लब २०१ 2018 अफ द इयर २०१ named का नाम लिएका थिए र ह्वाइटिकेसको गोल अफ द इयर अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि, उसले पोर्टलैंड टिम्बरहरूमा २-१को जीतमा दुई गोल गरेर क्लबलाई विदाई दिए। यस समयमा, युवा उत्कट युरोप देखि उसलाई बोलाउँदा आफ्नो भाग्य महसुस गर्न सक्दछ।
महिना पछि जनवरी २०१ 2019 मा, अल्फोन्सोले जर्मन राक्षस बायर्न म्यूनिखको लागि खेल्ने नयाँ सत्रको शुरुआत गरे। उनलाई २०१ 9.84 मा record £ 2018 लाख शुल्कको लागि क्लबमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। १-वर्ष उमेरको क्लबमा सामेल भएदेखि ऊ सुपरस्टारहरूसँग काँधमा मलहदै आएको छ - जस्तै रबर्ट लुवेन्डोस्की, Philippe Coutinho, डेभीड अल्बा - र उसले क्लबसँग पहिलो बुन्डस्लिगा उपाधि पनि जितेको छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
वास्तवमा, उहाँको प्रसिद्धिमा उदासी रहेको छ। छवि क्रेडिट: ESPN
अल्फोन्सो डेभिस को हो प्रेमिका?… के उनीसँग श्रीमती र बच्चा छन्?
उनले वास्तवमै जोर्डिन हुएटेमामा एक उत्तम खेल भेट्टाए। होइन?
खेलको क्षेत्रबाट टाढा, अल्फोन्सो क्यानाडाली जन्मेको प्रेमिका जोर्डिन हुएटेमासँगको सम्बन्धको लागि समाचारहरू बनाउँदछन्। जब lovebirds डेटि began शुरू भयो बारेमा धेरै थाहा छैन। जे होस्, तिनीहरू प्रेस द्वारा क्यानेडाली पावर सोकर जोडीको रूपमा देख्नको लागि लामो सँगै थिए। यो किनभने जर्डनले फ्रान्सेली डिभिजन १ फामेनिन क्लब पेरिस सेन्ट-जर्मेन र क्यानडा राष्ट्रिय टोलीका लागि पेशेवर फुटबल खेल्छ।
अल्फोन्स बायरन म्युनिकमा फर्कनु अघि नियमित रूपमा आफ्नो प्रेमिका जोर्डिनसँग राम्रो समय बिताउन पेरिस जान्छन्। तिनीहरू आफ्नो बढ्दो क्यारियरमा पर्याप्त ध्यान लगानी गर्दछन्, एक विकासले वर्णन गर्दछ कि उनीहरूका छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) बाहिर विवाहित छैनन्। यद्यपि, त्यहाँ कुनै तथ्य छैन कि उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई अर्को चरण (विवाह) मा लिन सक्दछन् कुनै समय बिना।
अल्फोन्सो डेभिस पारिवारिक जीवन:
अल्फोन्सो डेभिसको फुटबलमा उसको सफलता उनको अद्भुत परिवारमा छ। हामी बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् जब हामी तपाईंलाई यस सेक्सनमा उनको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं। हामी तपाईंलाई अल्फोन्सो डेभिसका अभिभावकहरूको बारेमा बढि तथ्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गरेर सुरू गर्दछौं।
अल्फोन्सो डेभिसको बारेमा बुबा र आमा:
विger्गरको अभिभावक क्रमशः देबेह र भिक्टोरिया हुन्। २०० 2005 मा डेबिया र भिक्टोरियाले घानाबाट क्यानाडा बसाईएको जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे जुन ठाउँको बारेमा केही थाहा थिएन वा त्यहाँ आफन्तहरू थिएनन्। तिनीहरू केवल विश्वास गर्छन् कि यो कदमले बच्चा अल्फोन्सोको उज्जवल भविष्य लिन सहयोग गर्दछ।
डेभिस अल्फोन्सोका अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यो निर्णयले उनीहरूले कल्पना गरेको भन्दा बढी पैसा तिर्ने भन्ने बिना गइन्छ। वास्तवमा, विger्गरले नोट गरे कि उसलाई प्रेरणा दिन सजिलो हुन्छ र जब त्यसले जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णयहरूमा फर्केर हेर्दछ जब उसका भविष्यका समर्थक आमाबाबुले भविष्यमा गरेका निर्णयहरू हुन्।
अल्फोन्सो डेभिसको बारेमा भाइबहिनी र आफन्तहरू:
अल्फोन्सोका दुई साना भाइबहिनीहरू छन् जो उनीभन्दा कान्छी थिए। तीमध्ये उनकी कान्छी बहिनी रूथ र एक सानो कान्छो भाई छ। भाइबहिनी क्यानाडामा जन्मेका थिए। त्यस्तै, तिनीहरूले अल्फोन्सो जस्तै क्यानाडाको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्दैन।
अल्फोन्सो डेभिस आफ्नो बुबा, आमा र कान्छो भाइबहिनीहरूसँग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यद्यपि त्यस विger्गरले प्रेस दिएको छैन आफ्ना भाइबहिनीहरूको बारेमा बढी जान्न। न त उनले आफ्नो पारिवारिक जरा र पुर्खाहरूको बारेमा कुरा गरेका छन किनकि यो उनका मामा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अल्फोन्सो काका, काकी, काकी, काका, भतिजा र भतिजीहरू पनि यस बायो लेख्ने क्रममा धेरै हदसम्म अज्ञात छन्।
अल्फोन्सो डेभिस व्यक्तिगत जीवन:
अल्फोन्सो डेभिस को हो?… के तपाईंलाई थाहा छ कि उसले व्यक्तित्व लक्षणहरू मूर्त रूप दिन्छ जुन वृश्चिक राशि निर्देशक व्यक्तिद्वारा निर्देशित व्यक्तिहरूद्वारा प्रदर्शित हुन्छन्? सत्य हो, शेफ डी (उसको उपनाम) भावुक, सहज, उत्कृष्ट हो र ऊ के भन्न चाहन्छ ठीक भन्न गाह्रो हुँदैन।
त्यहाँ केही खेलाडीहरू छन् जसले आफैंलाई उत्तम रूपमा अभिव्यक्त गर्न जान्दछन्। अल्फोन्सो सूची बनाउँछ। छवि क्रेडिट: बुन्डेस्लिगा।
अल्फोन्सोको व्यक्तित्वको विशेषताहरूमा थप्नको लागि यो आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा धेरै कुरा प्रकट नगरेको कुरा हो।
विger्गरको रुचि र शौकमा नाच, भिडियो गेमहरू खेल्न र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ। उहाँ खाना पकाउन पनि राम्रो हुनुहुन्छ, एक शौक जसले उनको उपनामलाई जन्म दियो "शेफ डी"।
अल्फोन्सो डेभिस जीवन शैली तथ्यहरू:
अल्फोन्सो डेभिस कसरी कमाउँछन् र आफ्नो पैसा कसरी खर्च गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा, यो जीवनी लेख्दा उनको अनुमानित १ मिलियन डलर छ। विger्गरको सम्पत्तीको स्ट्रिमहरू जुन उसले माथि उडान फूटबल खेल्दा ज्याला र तलबबाट लिन्छ।
विger्गरले समर्थनबाट महत्वपूर्ण आम्दानी पनि लिन्छ। यस्तै कुनै प्रश्न छैन कि कसरी उनले विदेशी कार र महँगो घरहरू जस्तै लक्जरी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्।
विger्गरको एक दुर्लभ तस्विर जसले एउटा अडीको भविष्यवाणी गरेको कारको पछाडिबाट आफ्नो झोला प्याक लिन प्रयास गरिरहेको छ। छवि क्रेडिट: Spox।
अल्फोन्सो डेभिस तथ्यहरू:
हाम्रो अल्फोन्सो डेभिस बचपनको कहानी र जीवनी समाप्त गर्न, वि the्गरको बारेमा यहाँ थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १- प्रति सेकेन्ड उसको तलब ब्रेकडाउन:
जनवरी २०१ in मा उनको सफलता पछि, धेरै प्रशंसकहरूले चिन्तित गरेका छन् डेभिस अल्फोन्सले कति कमाउँछ?…। त्यो २०१ Che, शेफ डीको सम्झौतामा उसले प्रति वर्ष १.२ मिलियन यूरो तलब भइरहेको तलब गरिरहेको देख्यो। थप आश्चर्यजनक तलको अल्फोन्सो डेभिसको तलब ब्रेकडाउन प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड हो।
के उसले प्रति वर्ष कमाउँछ € 1,200,000 £ 1,034,559
के उसले प्रति महिना कमाउँछ € 100,000 £ 86,213
के उसले प्रति हप्ता कमाउँछ € 24,390 £ 21,028
के उसले प्रति दिन कमाउँछ € 5,949 £ 5,129
के उसले प्रति घण्टा कमाउँछ € 248 £ 214
के उसले प्रति मिनेट कमाउँछ € 4.13 £ 3.56
के उसले प्रति सर्कन्ड कमाउँछ € 0.07 £ 0.06
अल्फोन्सो डेभिसले कत्ति धेरै आर्जन गरेको छ तपाईले यस पृष्ठलाई हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जर्मनीमा औसत व्यक्तिले कम्तिमा १.1.84 वर्ष कमाउन काम गर्नु आवश्यक छ € 86,123, जुन रकम शेफ डी १ महिनामा कमाउँछ।
तथ्य # १- FIFA Ranking मा असमानता:
अल्फोन्सको शीर्ष फ्लाइट फुटबल खेलको दुई वर्षको अनुभव छ, एक विकासले किन ऊ कम फिफा रेटिंग has 73 को छ भनेर वर्णन गर्दछ। यो समयलाई निको पार्ने र सुधार गर्ने ज्ञात तथ्य हो। केस विन्जरका लागि कुनै फरक हुने छैन किनकि ऊ 90 ० भन्दा बढी हुने सम्भावना राखी फिफाको सर्वश्रेष्ठ फुटबलरसमेत बन्छ।
उसको रेटिंग्स निश्चित रूप मा आगामी बर्षहरु मा एक meteoric वृद्धि रेकर्ड गर्न गइरहेको छ। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
तथ्य #3- धुम्रपान र मदिरा:
Pतहहरू जो धुम्रपान र गैरजिम्मेवारिक रूपमा पिउनेसँग गाढा ओठ र कानूनको साथ लगातार रन-ईन्सको लागि चीज छ। Alphonso दुबै परिणामको सही विपरीत हो।
तथ्य # १- ट्याटूहरू:
जब कुनै गर्वसाथ अँध्यारो हुन्छ तब ट्याटू गर्नु भनेको के हो? सेतो रेखाका साथ शरीर कलाहरू कोर्ने बाहेक, अल्फोन्सोलाई feet फिट ११ इन्चको उचाईको लागि कुनै बनाउन आवश्यक पर्दैन।
तपाईंले कुनै ट्याटू भेट्नुभयो? हामीलाई टिप्पणी बाकसमा थाहा दिनुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य # १- अल्फोन्सो डेभिसको धर्म के हो:
के तपाईंलाई मदर थेरेसा क्याथोलिक स्कूल याद छ?… हो, यो क्याथोलिक स्कूल हो एडमन्टन, क्यानाडा। अल्फोन्सो डेभिसका आमा बुबाले सम्भवतः आफ्ना छोरालाई क्रिश्चियन धर्महरूको विश्वासको पालनपोषण गर्नका लागि हुर्काएको छ भनेर संकेत गर्नको लागि हामीले यसको प्रयोग गरेका छौं। यद्यपि, ती केटाले खास गरी विश्वासको मामिलामा स्पष्टसँग स्पष्टसँग देखेका छैनन्। तर, हाम्रो अनौठो अल्फोन्सो एक इसाई हुनुको पक्षमा छ किनकि उसको एक बहिनी रूथ हो जबकि उसकी आमाको नाम भिक्टोरिया।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो अल्फोन्सो डेभिस चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
अल्फोन्सोको कान्छो भाई छ जसको नाम ब्रायन डेभिस हो। म उनीसँग सेन्ट बोनाभेन्चर प्राथमिकमा स्कूल गएँ। म निश्चित छु कि उनी सेन्ट अल्बर्टमा सरेका छन्। उसको इन्स्टाग्राम @ ब्रायनाडाभिस् हो
7 महिना पहिले
म धेरै खुशी छु र ईश्वरलाई धन्यबाद दिदै छु कि यी लाइबेरियाका अभिभावकहरूले विगतमा गरेको सफलताका लागि उनीहरूले आजको सफलताको फाइदाका लागि गरेका अद्भुत र सफल संघर्षहरूको लागि मशमा छन्।
अल्फान्सो आकाश तपाईंको सीमा हो मेरो भाई, तपाईं यो भन्दा बढि पनि गर्नुहुनेछ
तपाईंको परियोजनामा ​​प्रभु तपाईंको साथमा रहोस् !!!!!!!!!
हामी लाइबेरिनहरु तपाई संगै छौं हामी पहिले विगतमा लाइबेरियाको एकमात्र विश्वको लागि र आज उनी हाम्रो देशका लागि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ।
म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु फुटबलमा उच्च क्षमता प्राप्त गर्नुहोस्
(अर्थात् एक बलुन डी'ओर विजेता बन्न)।
घाना तपाईको घर हो
ल्यारी एम। मेलिंग
म अल्फोन्सोको यो जीवनीबाट रोमाञ्चित छु र लाइबेरियाको हैसियतमा म अझै गर्व महसुस गर्छु कि उसले भर्खरै आफ्नो जर्मन क्लबसँगै च्याम्पियन्स लिग फाइनल जित्यो। लाइबेरिया तपाइँलाई गर्व छ, अल्फोन्सो !!!! उच्च उडान र तपाईं एक दिन सबै भन्दा ठूलो फरक पार्छ
एन Zico Wreh
मैले भर्खरै PSG का साथ च्याम्पियन लिग फाइनलको समयमा तपाईंको प्रदर्शनहरू देखें। तपाईं यस्तो राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ।
भगवान तपाईंलाई अल्फोन्सो LIB आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईंको घर भाई सम्झाउनुहोस् हामी तपाईंलाई माया गर्छौं
जोसेफ एनके कोल्लेह
म लाइबेरियाको रूपमा धेरै खुसी छु मेरो लाइबेरियाको भाईले यस्तो प्रकारको फुटबल खेलिरहेको देख्दा, म उनलाई शुभकामना दिन्छु। सबै लाइबेरियन्सले तपाईलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ भाई अल्फानो डेभिस, तपाईले आफूलाई क्यानाडामा स्वभाविक बनाउनु भए पनि, हामी अझै लाइबेरियनको रूपमा प्रेम गर्दछौं।